Abenzi beTack Rack Belt kunye nabathengisi | Uhlobo
> = 3000 Amacandelo: L $ 0.48
Igama lemveliso Bopha iRack Rack
Inombolo yomzekelo: HS004
Ubunzima (g) 50g
Yangaphakathi: Iifayile ze-288
Ubunzima bobunzima (kg): 15.5kg
Ubunzima bomzimba (kg): 14.5kg
Ubungakanani beCarton (cm): Umthamo
Iitayi ezijikelezayo kunye ne-Belt hanger, ibambe amaqhina angama-20 okanye amabhanti, ilingana nayo yonke imizila ye-closet, iingalo ezingabambeki, ii-Spins 360 °
Uyilo olujikelezayo olunama-360-degree lulungele ukubekwa kunye nokuthathwa.
Uyilo olucingayo lusombulula ingxaki kwaye lushushu ngakumbi kwaye luyasebenza.
Ngumncedi olungileyo kubafazi bemizi kubomi babo bemihla ngemihla
Ngama-20 abamba, unokuxhoma izibophelelo ezininzi okanye amabhanti ngaxeshanye, ukwenza ulungiselelo lube mnandi
Amagumbi acocekileyo kunye neempahla zezakho.
Uyilo lokuloba: Inokusetyenziswa kuyo nayiphi na ikhabethe okanye indawo enokuxhonywa, kulula kwaye ikhawuleze ukuxhoma amaqhina amdaka kunye neebhanti.
Uyilo lwe-anti-slip: ukusetyenziswa kwenkqubo yoyilo lokulwa nesiliphu, kuya kukhululeka ngakumbi kuqinisekiswe, ngenene yimpahla ebalulekileyo ekhaya.
Egqithileyo Ngaphezulu komnyango wendawo yokuhlala
Okulandelayo: Ikofu Capsule
Sela imoto yokubamba, Amacwecwe ePlastiki alukhuni, Izibuko zelanga zangokwezifiso, Izixhobo zokuCoca imoto, INdebe yeNdebe yeMoto eyandisayo, Ipleyiti yePlastiki enokuphinda isebenze,